Golaha Shacabka oo Ansixiyey Xeerka Hanti-dhawrka Qaranka – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Golaha Shacabka oo Ansixiyey Xeerka Hanti-dhawrka Qaranka
Golaha Shacabka ayaa maanta meel-mariyey Hindisaha Sharciga Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka. Waxaa sharcigaan ogolaatay 164 Xildhibaan, waxaana diidday 11 Xildhibaan, cid ka aamustayna ma jirin. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, oo kulanka golaha ee maanta shir-guddoominayey, ayaa ku dhawaaqay inuu goluhu anisixiyey hindisahaas.
Hindisaha Xeerka Hanti-dhawrka Guud waxa uu Aqrintii Saddexaad maray 3 kulan ka hor kulanka maanta lagu ansixiyey. Hase ahaatee, waxaa, sida uu sheegay Guddoomiye Mursal, ay 12 Xildhibaan oo ka tirsan Golaha u gudbiyeen in wax laga beddelo hindisaha, taas oo maanta loo codeeyey, ugu dambeyntiina la meel-mariyey.
Xildhibaan Cismaan Xaaji, oo uu u yeeray Guddoomiye Mursal, kadib markii uu dalbaday inuu wax ka yiraa hindisaha, ayaa golaha hortiisa ka sheegay inuu soojeedin lahaa in magaca hindisaha oo u qoran “Sharciga Hanti-dhawrka Guud ee Federaalka” la bedelo. “Waa in loogu magac-daraa (hindisahan) Sharciga Hanti-dhawrka Guud ee Qaranka” ayuu yiri Xildhibaan Cismaan.
Xildhibaan Cismaan Xaaji waxa uu codsaday in si ka fiican sida ay hadda u dhigan yihiin loo caddeeyo qodobada ka hadlaya madax-banaanida Xafiiska Hanti-dhawrka. “Waa inuu madax banaan yahay Hanti-dhawrku, si uu u yeesho awood” ayuu yiri Xildhibaan Cismaan.
Maadaama ay Hindisaha Sharciga Hanti-dhawrka Guud u ahayd maanta xili uu meel-marin uun sugayey, ma dhicin in aad looga dooday, oo waxa ay Xildhibaannada Goluhu si fiican ugu soo falanqeeyeen hindisaha kulamadii ka horreeyey kulanka maanta.